Ilay Mpanjaka malemy fanahy sady mitaingina boriky – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 mars 23, 2013 mai 31, 2013 Laisser un commentaire sur Ilay Mpanjaka malemy fanahy sady mitaingina boriky
« Lazao amin’i Ziona zanakavavy: indro ny Mpanjakanao avy ho anao, malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zanaky ny boriky miasa » Matio 21:5
Raha mijery ara-jeograpfia kely isika, ny Ziona ao amin’ny Testamenta Taloha dia tendrombohitra iray izay niorenan’i Jerosalema. Nisy fotoana nakan’i
Davida izany tanàna izany, ary nametrahany ny Fiaran’ny faneken’i Jehovah ka
noheverina ho toy ny tanàna masina ny vohitr’i Ziona.
Ny tantara eto amin’ity Matio 21 ity dia manambara an’i Jesosy naniraka mpianatra roalahy ho amin’ny vohitra iray hamaha boriky mifatotra ka hoentina eo amin’i Jesosy mba hotaingenany. Fomban’ny mpanjaka rehefa hiatrika ady, na hampiseho ny heriny na ny voninahiny dia mitaingina soavaly sy kalesy, fa ny fitaingenan’ny mpanjaka boriky kosa dia milaza fanetren-tena, ary azo raisina ho tsy ho fitrevatrevana na tsy fampisehoana hery na filana ady.
Eto dia oharina amin’ny vehivavy i Ziona, ary ny Mpanjaka avy ho azy dia i Jesosy Kristy izay mitaingina boriky izay nampanalainy ny mpianany roa lahy.
Matetika ny vehivavy no mila fiarovana, ary lahy no mpiaro amin’izany, ny eto moa dia ny Mpanjaka mihitsy no ho avy. Tsy ho avy ho an’olonkafa, fa avy ho an’i Ziona zanakavavy. Ilay Mpajaka mihitsy no manao dingana manatona. Mariky ny fanetren-tena sahady avy amin’ny Mpanjaka izany. Hamafisin’ny teny manaraka izany, dia ny hoe « malemy fanahy ». Inona no mifanohitra amin’ny hoe malemy fanahy? Ny mifanohitra amin’izany dia ny hoe mitrevatreva, na koa hoe miavonavona. Izany dia mbola hamafisin’ny
teny manaraka koa, hoe: mitaingina boriky. Mpanjaka mitaigina boriky, fa tsy Mpanjaka mitaingina soavaly. Izany hoe Mpanjaka avy amin’ny fanetrentena i Jesosy . Jesosy Ilay Mpanjaka avy amin’ny fietrena hanatona, hitady fihavanana. Azony natao tsara ny nitaigina soavaly fa nifidy ny hitaigina boriky Izy. Izao no voasoratra ao amin’ny epistily ho an’ny Filipiana 2:6, « Jesosy Kristy, Izay na dia nanana ny endrik’Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra hofikiriny mafy ny fitoviana amin’Andriamanitra. Fa nofoanany ny tenany tamin’ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manampitoviana amin’ny olona ». Inona ary no vokatry ny fananany
fitoviana amin’ny olona? Niharan’ny fahafatesana Izy satria olona. Maty
tokoa Jesosy Kristy, nefa tsy fahafatesana tsotra fa fahafatesana tena tao amin’ny fahafam-baraka satria fahafatesana tamin’ny hazo fijaliana.
Inona no antony naneken’ny Tompo izany rehetra izany?
Ny nanekeny izany dia ny mba ho fampihavanana ny olona amin’Andriamanitra, ary avy eo ho fampihavanana ny olona amin’ny olona. Izany rahateo moa no dikan’ny hazo fijaliana.
Nahoana no mila fampihavanana amin’Andriamanitra ny olona, ary
nahoana no mila fampihavanana ny olona samy olona? Satria nisy fahasimbany izany fihavanana izany. Inona no nahasimba izany fihavanana izany? Ny Fahotana no naha simba izany!
Jesosy Kristy no mitady fihavanana amintsika! Tokony ho raisintsika izany fihavanana izany; Ny vokatry ny fandraiasantsika ny fihavanana amin’i Kristy dia ny fanamarinana antsika: ny fahalalàna Azy no hanamarinan’ny Mpanompoko marina ny olona maro. Ny fandraisana ny fihavanana atolotr’ i Jesosy Kristy dia midika ho fahalalàna Azy. Raha mandray ny fihavanana
atolony isika dia marina satria Izy no manamarina antsika. Rehefa mihavana Aminy isika dia amin’izay no atao hoe zanaka koa isika. Natsangana ho zanaka isika.
Inona no tokony ataontsika ny amin’izao zavatra nataon’i Jesosy eto amin’izao tantara eto izao?
1- Tokony handray ny fihavanana atolony isika.
2- Rehefa nandray ny fihavanana natolony isika dia miroso amin’izay lazain’ny teny ao amin’ny Filipiana 2 teo dia ny hoe: Aoka hoa ao aminareo izao saina izao, izay tao amin’i Jesosy Kristy koa: nanana ny endrik’Andriamanitra Izy nefa tsy nataony hoa zavatra hofikirina mafy ny fitoviana amin’Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin’ny nakany ny endriky ny mpanompo sy nanekeny ho manampitovina amin’ny olona.
Rehefa voavonjy isika dia maka izao sain’ny Tompo izao. Mampahafantatra ny Tompo amin’ny hafa.
Mba mampahalala an’i Jesosy amin’ny hafa ve ianao izay efa vita fihavanana Aminy? Ny fahalalàna ny Mpanompoko no fanamarinana ny maro hoy ny Soratra Masina. Mety tsy nahatanteraka izany isika noho ny antony samy hafa.
Fotoana mbola mety hanavaozantsika ny fanolorantena , na hanolorantena mihitsy aza izao.
Hoy ny Tompo amintsika anio: izay rehetra manatona Ahy tsy mba holaviko mihitsy. Aoka atolontsika Azy ny fiainantsika sisa tavela.
Publié parfilazantsaramada mars 23, 2013 mai 31, 2013 Publié dansUncategorized